စွန်ထန်ခြောက်ပြု လုပ်နည်း ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
စွန်ထန်ခြောက်ပြု လုပ်မယ်ဆို..မုန်ညှင်းစိမ်း ၊ မုန်လာဥဖြူ အရွက်တွေသုံးနိူင်ပေမယ့်အကောင်းဆုံးကတော့..မုန်ညှင်းစိမ်းဖြစ်ပါတယ်။
မုန်ညှင်းစိမ်း ခပ်ရင့်ရင့်တွေကို ရွေးချယ်ပြီး..အပင်လိုက်(သို.) အရွက်တစ်ခု
ချင်းစီကို( သဲစင်အောင်) ရေးဆေး ၊ ရေစစ်ထားပါ။
ထို.နောက် နေပူပူ မှာ ကြိုးတန်းလေးပေါ်တွဲလောင်းချပြီး နေပြပေးရပါမယ်။
အတော်လေးနွမ်းပြီးဆိုရင်တော့..ဆား ၊ ထမင်းရည်တို.နဲ. (မကြေအောင်)
ဂရုစိုက်နယ်ပြီး..ပုလင်းလွတ်( သို.) စဉ့်အိုးလွတ်သန်.သန်.မှာအချဉ်သိပ်ပေးပါ။
အိုးထဲမှာကျန်ခဲ့တဲ့အချဉ်ရည်တွေကို ၃ ပုံ ၁ ပုံ ကျန်အောင်ကျိုပြီးအအေးခံထားပါ။
နေလှန်းထားတဲ့မုန်ညှင်းရွက်တွေအနည်းငယ်ခြောက်တာနဲ့ကျိုထားတဲ့အချဉ်ရည်မှာ ပြန်စိမ် ပြီး..နေပြန်လှန်းပေးပါ..။
(ဒီလိုပြန်ပေါင်းလိုက်မှာသာလျှင် အနံ့၊အရသာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ စွန်ထန်ခြောက်အဖြစ်သို.ကူးပြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ် )
ပေါင်းအိုးထဲကထုတ်တဲ့ စွန်ထန်ခြောက်တွေကို နေပူပူမှာခြောက်နေအောင်
မှတ်ချက်..ကျွန်တော်တို.ဒေသမှာ မုန်ညှင်းပေါချိန်က ဆောင်းရာသီဖြစ်တာကြောင့်..ရေဆေး ၊
စစ်ထားတဲ့ မုန်ညှင်းတွေကို နှင်းအရိုက်ခံကြပါတယ် ။
ဒီပို.စ်အတွက်ကူညီပေးတဲ့ ငယ်သူငယ်ချင်း နီလာထွန်း ကိုကျေးဇူးအထူးတင်
Photo Credit ...http://eatingasia.typepad.com/eatingasia/2010/04/shan-pickle-its-whats-for-dinner.html